Eritreritra tsy tana nataon’ilay mpikatroka mpanao gazety tamin’ny fihaonany tamin’ny masoivoho iraniana nandritra ny lanonana farany taona iray tao New York · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Desambra 2015 6:31 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, українська, English
Masih Alinejad mpanao gazety mpiendaka mieritreritra amin'ny fanatrehana lanonana natrehan'ny masoivoho iraniana ao amin'ny Firenena Mikambana. Sary avy amin'i Alinejad ao amin'ny kaontiny Instagram.
Masih Alinejad, Iraniana mpanao gazety monina ao New York amin'izao fotoana izao, no mpanorina ny pejy Facebook namariparitra azy ho hetsika ara-tsosialy vaovao ho amin'ny zon'ny vehivavy ao Iran. Ny pejy dia antsoina hoe “My Stealthy Freedom,” [ny fahafahako virtoaly] ary manasongadina ireo vehivavy Iraniana manaisotra ny sarondohany eny imasom-bahoaka ho fanoherana ny lalànan'ny hijab tsy maintsy anaovana ao amin'ny firenena. Efa tao anatin'ny lalàna sy fitsipika islamika hatramin'ny revolisiona islamika tamin'ny 1979 ny fampiharana ny tsy maintsy itafiana hijab izany.
Vao lasa ny andro krismasy teo dia namoaka ity tsanganana misy ventiny ity tao amin'ny kaontiny Instagram manoritsoritra ny fihaonany tamin'ny Ambasadaoro sady solontena maharitr'i Iran ao amin'ny Firenena Mikambana, Gholamali Khoshroo ity izy. Nifandona tamin'ny Ambasadaoro izy tamin'ny lanonana andro fety iray tao amin'ny fonenan'ny ambasadaoro sady solontena maharitr'i Finland ao amin'ny Firenena Mikambana, Kai Sauer.
Rehefa nanatona ny Ambasadaoro Iraniana ravehivavy, dia tsy nanaiky ny hifandray tanana hiafmpiarahana na ny hifanatri-tava akory aza ralehilahy. Tamin'izany toe-javatra izany i Alinejad no namoaka eritreritra sendra nandalo tamin'ny nanasana azy amin'ny maha-mpanao gazety miendaka amin'ny fitondrana sady mpialokaloka azy ao anatin'ny lanonana iray ahitana ny manampahefanan'ny Repoblika Islamika.
Tao amin'ny tsanganana i Alinejad no niara-naka sary tamin'ny mpampiatrano ny lanonana, ny Ambasadaoro Finlandey ary namoaka ny eritreriny tao amin'ny fanazavana ny sary tahaka izao:
Sary ao amin'ny Instagram
Nanasa ahy tao an-tranony tamin'ny lanonana faran'ny taona ny Ambasadaoron'i Finland ao amin'ny FIrenena Mikambana sy ny sakaizany. Nanatrika izany izaho sy ny vadiko ary vantany vao tafiditra tao izahay dia tsikaritro tao i Khoshroo, Ambasadaoro Iraniana sy ny vadiny. Nanao hijab ny vadiny sy akanjo tena ara-damaody mihitsy koa. Tao anivon'ireo diplaomaty avy amin'ny firenen-tsamihafa ireo dia nientanentana aho raha nahita ireo Iraniana mpiray tanindrazana. Nanatona azy ireo aho ary naninjitra ny tanako, nandray ny tanako tamin-kafanana sy tsiky ny vadiny ( izay tsy fantatro ny anarany). Rehefa naninjitra ny tanako tamin'Atoa Khoshroo aho ary niteny hoe ‘tsy hanontsana ny tanako angamba ianao’. Dia namaly izy ‘tsia, tsy hanao izany aho’. NItsiky aho ary niteny hoe tsy maninona izany, na aiza na aiza ahitana Iraniana dia mientanentana hatrany aho ary mba te-hiarahaba fotsiny aho. Ny gorodona fotsiny no nojeren'Atoa Ambasadaoro ary tsy nijery imaso sady tsy niloa-bava akory aza, sady tsy nitsiky mihitsy, nefa ny vadiny feno tsiky sy sariaka. Niteny tamiko aho hoe jereo anie ny korontana nentin'ny fahasamihafana politika tamintsika. Nandao mialoha ny lanonana izy ireo ary noho ny fikirizako hifandray dia niteny azy ireo aho hoe ‘alefaso any ny fiarahabako!’ Tsy nahare valiny aho. Nahafantatra angamba Atoa Ambasadaoro fa tsy misy mila ny arahabako. Alefany ho aiza tokoa moa izany ny arahabako, amin'i Rouhan sy Zarif na ireo henjam-pisainana maniry ny tsy isian'ny olona tahaka ahy? Sa amin'ny reniko sy ny raiko izay mieritreritra fa ny tontolon'ny tsy mino [tsy matoky] dia ao anatin'ny fireharehana sy ny finoana tsy izy. Tsy fantatr'izy ireo fa miaina ao anatin'izany tontolon'ny tsy matoky izahy aho ary manatrika lanonana izay nanasana ny manampahefanan'ny Repoblika Islamika ihany koa. Tahaka ny hoe mety ilay izy ho azy ireo, saingy ho ahy dia fahitana izany. Raha mandeha amin'ny lanonana toy ireny ry zareo dia tia tanindrazana, saingy raha izahay no mandeha dia mamadika ny tanindrazana? Nanontany ahy ny Ambasadaoro Finlandey sy ny vadiny raha nifanena tamin'ny Ambasadaoro Iraniana aho. Nolazaiko azy ireo fa hitako zy zareo fa ry zareo no tsy te-hahita ahy. Nilaza tamiko ry zareo fa manahy ny amin'ireo eksitremista ry zareo, na ireo henjam-pihetsika hody an-tanindrazana. Fantatry ny Ambasadaoron'i Finland sy ny vadiny ihany koa ny “Fanentanana Ny Fahafahako Virtoaly” ataoko ary niarahaba ahy tamin'izany ry zareo sady nahafantatra fa vehivavy ny 60%-n'ny oniversite ao Iran. Tamin'ireo no nilazako fa indray andro any dia hamirapiratra ao Iran ny andro rehefa hiarahaba ny vehivavy sy ny mpanao gazety Iraniana tsy misy tahotra na rehareha izy ireo, na misy aza ny fahasamihafana ara-politika, dia hanontsana ny tanana sy tsy hanahy ho azo sary miaraka aminay tsy misy fanahiana na tahotra.